IPL तथ्यहरू तपाइँलाई आईपीएल कपाल हटाउने-प्राविधिक जानकारी गर्नु भन्दा पहिले जान्नु आवश्यक छ - शेन्जेन कुनै स्मार्ट स्मार्ट विनिर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
आईपीएल कपाल हटाउन अघि Fac तथ्यहरू तपाईंले जान्नु आवश्यक छ
समय: 2019-12-11 हिट्स: 126
शरीरबाट अनावश्यक कपाल हटाउनका लागि आईपीएल कपाल हटाउनु उत्तम र सुरक्षित तरीका हो।
यहाँ आईपीएल कपाल हटाउन अघि तपाइँले जान्नु पर्ने4तथ्यहरूको लागि हाम्रो मार्गनिर्देशन यहाँ छ।
१. कुनै अधिक वैक्सिंग छैन!
तपाइँ आईपीएल कपाल हटाउन को लागी धैर्य हुनु पर्छ, उपचार बीचमा तपाईले पाउनुहुनेछ कि तपाईको कपालको बृद्धि हुन सक्छ। आईपीएलको प्रभावकारी ढ to्गले काम गर्नको लागि, तपाईंको उपचारको समयमा तपाईंको कपाल जडानमा हुनु आवश्यक छ।
तपाईं दाह्री र ट्रिमिंग भन्दा कपाल हटाउने विधि कुनै पनि प्रकारको नगर्न सिफारिश गरिन्छ। यो किनभने अन्य विधिहरूले कि त बलको साथ मूलबाट कपालहरू काट्छन् वा तिनीहरूले क्षेत्रमा बढ्दो उत्तेजित गर्न सक्दछन्।
२ गोरा, सेतो वा रातो कपालमा काम गर्दैन
आईपीएल कपाल हटाउने मेसिनहरु तपाइँको कपालको वर्णकमा आकर्षित हुन्छन्। केशहरू जो गोरा, सेतो वा रातो अभाव वर्णक छन्। राम्रो कपाल र कपालहरु जो एक धेरै हल्का खैरो रंग पनि पनी अधिक गाह्रो यसको कारणले गर्दा। यो सधैं उत्तम हुन्छ कि तपाईले थेरापिष्टलाई कुनै कोर्स किन्नु भन्दा पहिले आफ्नो कपालको बृद्धि जाँच गर्नुहोस्।
A. ट्याटुमा वा अधिक गर्न सकिदैन
यदि तपाईं आईपीएल प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने ट्याटु छ भने यो उपचार गर्न सकिदैन। आईपीएल कपाल हटाउन या त क्षेत्र जलाउन वा ट्याटो फीका हुन सक्छ। यदि तपाईं ट्याटु हटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो तपाइँको लागि पनी सही प्रक्रिया होईन। तपाईंले एक सलुन खोज्नु पर्छ जसले यो उपचार प्रदान गर्दछ।
It's. यो एक लामो अवधि को कटौती हो
तपाईको उपचार सकिए पछि तपाई सम्भवतः वर्षौंसम्म कपालमुक्त हुन सक्नुहुन्छ। परिणामहरूको लम्बाउनको लागि तपाईले मर्मत सत्रहरूको आवश्यक पर्दछ। धेरै व्यक्ति यस्तो धारणामा छन् कि आईपीएलले कपाल को १००% स्थायी हटाउने प्रस्ताव गर्दछ। यो कुनै आईपीएलको रूपमा छैन जुन हाल उपलब्ध छ प्रत्येक र प्रत्येक व्यक्तिगत कपाल हटाउने प्रतिज्ञा गर्न सक्षम छ। तर केहि व्यक्तिले हाम्रो आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गरेपछि उत्कृष्ट परिणामहरू देख्छन्।
ट्रस्ट नोबल, ट्रस्ट आईपीएल, तपाईं एक सुन्दर छाला र अद्भुत जीवन पाउनुहुनेछ!
अघिल्लो: लेजर कपाल हटाउने सम्भावित जोखिमहरू
अर्को: लेजर र आईपीएल कपाल हटाउन बीच के भिन्नता छ? （PartⅢ）